Gbanwee mkpebi ihuenyo nke Mac gị dị ka ngwa ị mepere SwitchResX | Esi m mac
Gbanwee mkpebi ihuenyo nke Mac gị dị ka ngwa ị mepere SwitchResX
Ọ bụrụ na ị na-eji ike gị Mac, ị nwere ike ịchọtala onwe gị n'ọnọdụ nke inwe nyocha nke abụọ ejikọrọ na MacBook gị ma ọ bụ ikekwe nyocha nke abụọ ma ọ bụrụ na ọ bụ MacPro ma ọ bụ Mac mini. Dabere n'ụdị ihuenyo ị jikọọ na kọmputa, ọ ga-enwe ọtụtụ mkpebi dị ma ọ bụ na ọ gaghị.
Ọ bụrụ n'otu oge ahụ ị na-eji ngwa dị iche iche ịchọrọ ịme na mkpebi ihuenyo dị iche iche, ọ dị mkpa iji ngwa nke atọ na ọ bụ na usoro nke apụl bitten anaghị ekwe ka ihe dị otú ahụ akpaka.
Ngwa emere maka ọnọdụ a na nke ị nwere ike gbalịa ụbọchị 10 n'efu es Gbanwee. I nwere ike ibudata ya na peeji nke onye nrụpụta gị ma bido nụ ụtọ ọnụọgụ nhọrọ ndị ọzọ ọ na - ahapụ gị ịhazi na sistemụ OS X.
Ọ bụrụ na ọ bụrụ na ụbọchị iri nke ikpe ikpe ikpebie ịzụta ngwa ahụ, ọ ga-efu euro 14.
Banyere ntinye ya, ọ dị mfe ma ọ ga-ezuru gị ị ga-agba ọsọ nwụnye faịlụ maka uru a ga-agbakwunye na ngalaba Mmasị Sistem na mgbakwunye a na-agbakwunye obere akara ngosi nke ihuenyo n'elu ogwe nke Finder. Site na ịpị akara ngosi ahụ, anyị nwere ike ịhụ njedebe nke mkpebi ndị dịnụ na OS X n'onwe ya anaghị ekwe ka anyị jiri. Dịka ọmụmaatụ, na nke m, enwere m ike iji mkpebi 1680 x 1050 na MacBook 12-anụ ọhịa, jiri ohere nha ihu igwe dị mma karịa ọnụ ahịa nke font dị obere.
Ihe ikpe anyị chọrọ ịgwa gị banyere ya n'isiokwu a bụ na ịchọrọ ngbanwe ihuenyo gbanwere dabere na ngwa ị mepere n'oge niile. Maka nke a ị na-aga Mmasị sistemụ> SwitchResX> Ngwa. Pịa na bọtịnụ "+" dị na ala wee lelee na folda ngwa ahụ maka nke anyị chọrọ ịgba na mkpebi dị iche.
Ugbu a na obere windo na-egosi, pịa «Mepụta ihe ngosi ohuru»Nke na - akpo windo ohuru nke anyi ga - enwe ike họrọ mkpebi na anyị chọrọ na mgbakwunye na inwe ike inye nhazi a aha.
Were nyocha na oburu na inwere otu enyo mgbe i mepere ngwa ichoro ime na mkpebi ozo, onodu sistemu dum gha adiriri na otu mkpebi rue mgbe imechiri ngwa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Gbanwee mkpebi ihuenyo nke Mac gị dị ka ngwa ị mepere SwitchResX
Mujjo gosipụtara uwe ya na-ebu-On maka MacBook 12-inch
Igha iwu na OS X site na iji iwu olu